Qingdao Vehivavy sy Hopitaly Ankizy - siansa sy teknolojia teknolojia Shenzhen Doneax CO., LTD
Hopitaly vehivavy sy ankizy Qingdao
Ny hopitaly vehivavy sy ankizy Qingdao, fantatra amin'ny anarana hoe Qingdao Women and Children's Medical Center, dia natsangana tamin'ny alàlan'ny fampitambarana ny hopitaly fiterahana Qingdao, ny hopitalin'ny ankizy Qingdao, ny tobim-pahasalamana ho an'ny reny sy ny zaza Qingdao, ary ny foibem-pikarohana momba ny drafi-pianakaviana Qingdao. Hopitaly telo-A izao manambatra fitsaboana ara-pahasalamana, fikarakarana ara-pahasalamana, famerenana amin'ny laoniny, fikarohana siantifika ary fampianarana.
Ny hopitaly vehivavy sy zaza Qingdao dia natsangana tamin'ny fampitambarana ny hopitaly fiterahana Qingdao, ny hopitalin'ny ankizy Qingdao, ny tobim-pahasalamana ho an'ny reny sy ny zaza Qingdao ary ny Ivontoerana fikarohana momba ny fandrindrana ny fianakavian'i Qingdao. Misy fizarana 3 amin'izao fotoana izao.
Izy io dia manana sampana feno ao amin'ny hopitaly, miaraka amin'ny sampana fitsaboana manokana maherin'ny 40 sy sampan-draharahan'ny fahasalamana amin'ny fiterahana sy gynecology, pediatrics. Noho izany, afaka manome serivisy fitsaboana, fikarakarana ara-pahasalamana ary fanarenana izahay ho an'ny vehivavy sy ny ankizy amin'ny fomba rehetra. Anisan'ireny, misy departemanta manokana manan-danja klinika miisa 6 sy fahaizana manokana (fandidiana aretim-po, fiterahana, fitsaboana anaty zaza, foibem-pon'ny ankizy, sampana neonate, ivon-toeram-pitsaboana fananahana), sampan-draharaha manan-danja 1 kilasy fitsaboana ara-pahasalamana sy fahasalaman'ny tanàna (fon'ny ankizy ivon-toerana), sampan-draharaha lehibe 5 ao amin'ny sokajy B (fananahana, fananahana, fanabeazana aizana, sampana onkolojia momba ny hematolojia momba ny zaza, ary ny fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny ankizy).